San Htun's Diary: ချယ်ရီပွဲတော်သွား တောလား ...
ချယ်ရီပွဲတော်သွား တောလား ...
နွေဦးပွဲတော်တွေမှာ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ဝါရှင်တန်ဒီစီက ချယ်ရီပွဲတော်ပါ။ မတ်လ ၂၀ ကနေ ဧပြီ ၁၂ အထိ ကျင်းပပါတယ်။ ချယ်ရီတွေ အစွမ်းကုန်ပွင့်ဖို့ခန့် မှန်းကြတာက ဧပြီ ၁၁ - ၁၄ ရက်အထိဆိုတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့ ဧပြီ ၁၁ - ၁၂ မှာသွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ အီတလီရုံးမှာ အတူတူလုပ်ခဲ့ပြီး အခုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဝိုင်းသူငယ်ချင်း အမေရိကန်မလေးက ဝိုင်းကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ပေမဲ့ ဝိုင်းက အဲဒီနေ့ မှာ အီတလီနားက အယ်လ်ဘေးနီးယားကို သွားရမှာမို့ချယ်ရီပွဲတော် မနွှဲနိုင်တော့ဘူး။ မနှစ်က နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဘရွတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းက ချယ်ရီပွဲတော်ကို ဝိုင်းသွားတယ်တဲ့ ဝင်ကြေးက ၂၅ ကျပ်တောင် ပေးရတယ်။ ဒီစီချယ်ရီပွဲတော်ကို ဝိုင်းပါ လိုက်နိုင်ရင် ကိုယ်တို့ သွားနေကျ ဘက်ဂျက်တရုတ်တိုးကားနဲ့သွားဖို့ စဉ်းစားထားတာ။ ၁ ညအိပ် ၂ ရက်ခရီးကိုမှ ၁၀၀ ပဲ ပေးရတယ်။ ဝိုင်း မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားစီးသွားမယ်။ ဒီစီရုံးက ကလဲရားအိမ်၊ ဆူနမ်တို့ အိမ်မှာ အိပ်လို့ ရတော့ ဟိုတယ်ခ သက်သာသွားတယ်။ ရထားလက်မှတ်က အစောတုန်းက ၈၀ မသွားခင် တပတ်အလိုမှာ ဘွတ်ဖို့ ကြည့်လိုက်တော့ ၁၅၀ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘတ်စ်ကားခက ၅၅ ကျပ်ပဲ ပေးရတယ် ဒါတောင် တပတ်လောက် ကြိုဘွတ်ရင်၊ ကြားရက်တွေဆို ၃၅ ကျပ်လောက်နဲ့ရတယ်။
ဧပြီ ၁၁ ရက် စနေနေ့ မနက် ၅ နာရီခွဲ ကိုယ့်အိမ်ကနေ အမြန်ရထားတွေရှိတဲ့ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ဘူတာကို ရထား ၂ ဘူတာ စီးရတယ်။ ရထားမစီးချင်တာနဲ့လမ်းလျှောက်တော့ မနက်စောစောစီးစီးမို့လူတွေရှင်းနေတာပဲ။ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ဘူတာကနေ အမြန်ရထား E စီးပြီး ပေါ့အသော်ရတီဘူတာမှာဆင်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရှာတာ မတွေ့ လို့မေးကြည့်တော့ ခုရောက်တာ South Wing ဘတ်စ်ကားတွေရှိတာက North Wing ဟိုတံခါးကနေ လမ်းမကူးလိုက်ရင် South Wing ရောက်ပြီတဲ့။ မနက် ၆ နာရီခွဲ ဂိတ် ၆၄ ဝါရှင်တန်ဒီစီဂိတ်ရောက်တော့ လူတွေမှာ အများကြီး။ ဘုတ်ဒင်းနံပါတ်က ၃၄ ဆိုတော့ ၃၀ - ၄၀ လို့ရေးထားတဲ့ ကျူတန်းမှာစီ။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်ခုံကတော့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ထိုင်လို့ ရတယ်။ ဒီတခါတော့ အချိန်တိကျတယ် မနက် ၇ နာရီအတိမှာ ထွက်တယ်။ ဒရိုင်ဘာက အမျိုးသမီး မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အိုင်ပတ်၊ သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ တခြားခရီးသွားတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် နားကြပ်သုံးဖို့ ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့တားမြစ်ပါတယ်။ မနက်စောစော အိပ်ယာထရတော့ ကိုယ်လည်း အိပ်တဲ့အခါအိပ်၊ နိုးတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကြည့်။ နယူးဂျာဆီ၊ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်တွေမှာတော့ သစ်ပင်တွေက ရိုးတံကျဲကျဲ အားလုံးဗလာကျင်းလို့ ။ မေရီလန်းပြည်နယ်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းတွေ မြင်ရတယ်။ ပန်းပွင့်တွေကလည်း ပွင့်လိုက်တာ ပင်လုံးညွှတ်ပဲ။ မေရီလန်းပြည်နယ်က တောင်ဖက်ကျတော့ နယူးယောက်နဲ့ ယှဉ်ရင် အအေးပေါ့တယ်။ ဒီလမ်းတွေကို သိပါတယ်လို့စိတ်ထဲထင်နေလို့ဂူဂယ်မတ်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ ခုရောက်နေတဲ့မြို့ က ဆေးဗားစပရင်းမြို့ တဲ့။ မမှတ်မိဘဲနေပါ့မလား ကိုယ်နေခဲ့တဲ့မြို့ ကိုး အဲဒီလမ်းတွေမှာ ကိုယ်အခေါက်ခေါက် အခါခါ မောင်းခဲ့ဖူးတယ်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီ ယူနီယမ်စတေရှင်းထဲဝင်တော့ ၁၂ နာရီကျော်နေပြီ။ Chipotle ချစ်ပိုလေးမှာ နေ့ လည်စာစားတော့ အစားအသောက်က ကိုယ်သတိထားမိလောက်အောင်ကို မနှစ်ကထက်စာရင် တော်တော်နည်းသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုအရွယ်အစားကမှ ကိုယ့်အတွက် အတော်ပဲ။ နေ့ လည်စာစားပြီးတော့ ကယ်ပီတယ်ကိုဖြတ်ပြီး နေရှင်နယ်မောလ်တလျှောက်ကနေ ချယ်ရီပွဲတော်ရှိတဲ့ တိုင်တယ်ဘေဆင်ဆီကို လမ်းလျှောက်တယ်။ ကယ်ပီတယ်က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဖို့ငြမ်းတွေဆင်ထားတော့ အရင်ကလောက် မလှဘူး။ ကယ်ပီတယ်ရှေ့ က လိုင်ဘယ်ရီအော့ဖ်ကွန်ကရက်မှာ ကျူတန်းကြီးက အရှည်ကြီး။ ရာသီဥတုက ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် နွေးနွေးလေး နေလို့ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကယ်ပီတယ်ဘေးကဖြတ်တော့ ရဲတွေက ဟိုဘက်ကနေသွားဖို့လက်ပြနေတယ်။ ကယ်ပီတယ်ရှေ့ မှာ ရဲကားတွေတဝီဝီဖြစ်နေတော့ ဘာလဲလို့သွားစပ်စုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ကွန်ဂရက်အမတ်လို့ ကြားလိုက်တော့ တခုခုတော့ တခုခုပဲ။ ကယ်ပီတယ်ရှေ့ က Refelctio Pool ကနေ မိုးနူမတ်ကျောက်တို်င်ကြီးကို မြင်ရတယ်။ ဒီစီကတော့ အမြဲတမ်း စည်ကားနေတာပါပဲ။ ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်း၊ စမတ်ဆိုးနီးယမ်း၊ National Museum of National History ၊ National Gallery of Art ကုိုယ် သိပ်သဘောကျတဲ့ပြတိုက်တွေ။ ဒီစီရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တခုက ပြတိုက်တော်တော်များများ ဝင်ကြေးအခမဲ့။ ပြတိုက်တွေကလည်း အကြီးကြီးတွေ အထပ်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းကို နှံ့ ဖို့ ဆို ၄ ၊ ၅ နာရီလောက် ကြာတယ်။ မေရီလန်းမှာနေတုန်းက ပိတ်ရက်တွေဆို ဒီစီကိုသွား ပြတိုက်တွေအနှံ့သွားခဲ့တာ သိပ်မှန်တာပဲ။ National Air and Space Museum ရှေ့ မှာတော့ ကျူစီနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက မနည်းမနော။
shooting near US Capitol on 04/11/2015
US Capitol & Reflection pool
တိုင်ဒယ်ဘေဆင် Tidal Basin ဘေးက ချယ်ရီပွဲတော်ကို ချီတက်ကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ကြက်ပျံမကျဘဲ။ မနှစ်က ချယ်ရီတွေက လှသလို ဒီနှစ်ချယ်ရီတွေကလည်း လှမြဲလှဆဲ။ Parade ရှိပေမဲ့ သွားမကြည့်တော့ပါဘူး။ ပွဲတော်ရဲ့ အလှကို တကယ်ခံစားချင်ရင် သမိုင်းကြောင်းကို နည်းနည်းလေးသိဖို့လိုပါတယ်။ ၁၉၁၂ မတ်လ ၂၇ ဂျပန်ပြည်ကနေ ချစ်ကြည်ရေးလက်ဆောင်အဖြစ် ရောက်လာတဲ့ ပထမဆုံး ယိုရှီနို Yoshino ချယ်ရီပင်တွေကို တိုင်ဒယ်ဘေဆင် မြောက်ဘက်ကမ်းပါးမှာ စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ ချယ်ရီပင်တွေကို လက်ရှိနေရာမှာ စိုက်ပျိုးခွင့်ရဖို့ ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဂျပန်ပြည် ပထမဆုံး အလည်အပတ်ခရီးကနေ ဝါရှင်တန်ကို ပြန်လာတဲ့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ၊ ဖိုတိုဂရပ်ဖာ၊ National Geographic Society ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီး ဘုတ်မန်ဘာ Mrs.Eliza Scidmor က ယူအက်စ်စစ်တပ် အများပြည်သူသုံး အဆောက်အဦး၊ ကစားကွင်း ဆောက်လုပ်ရေးကို ချည်းကပ်ပြီး ပတ်တိုးမတ် မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ချယ်ရီပင်တွေ စိုက်ပျိုးရေး အဆိုပြုချက်ကို တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ မကြားချင်ယောင် ပြုခဲ့ကြတယ်။ ၂၄ နှစ်လုံးလုံး တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ အထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၀၆၊ ၁၉၀၇ နာမည်ကြီး horticulturist David Fairchild က ဂျပန် Yokohama Nursery Company ကနေ ချယ်ရီပင် ၇၅ ပင် တင်သွင်းပြီး ခံနိုင်ရည်စွမ်းကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့အခါ ဝါရှင်တန်ဒီစီက လမ်းမကြီးတွေရဲ့ ဘေးမှာ ချယ်ရီပင်တွေ စိုက်ပျိုးရေးကို Farichild မိသားစုဝင်တွေက စည်းရုံးပါတယ်။ ၁၉၀၈ Arbor Day ပို့ ချချက်မှာ Fairchild က တိုင်ဒယ်ဘေဆင်ကို ချယ်ရီပင်တွေ ဝေနေအောင် ဖန်တီးဖို့ အဆိုပြုချက်ကို တင်သွင်းခဲ့ပါတာကို တက်ရောက်သူ Eliza Schidmor က တေးမှတ်ထားပါတယ်။
နှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် ၁၉၀၉ မှာတော့ ချယ်ရီပင်တွေ စိုက်ပျိုးဖို့ရန်ပုံငွေရှာပွဲ အစီအစဉ်တွေကို သမ္မတကတော်အသစ် Helen Herron Taft ဆီ စာရေးသားပါတယ်။ Mrs. Taft က ဂျပန်မှာ နေဖူးတော့ ချယ်ရီအလှကို ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အနောက် တိုကျိုက ဝါရှင်တန်ကို ချယ်ရီပင် ၂၀၀၀ လှုဒါန်းဖို့ ရည်စူးထားတဲ့အကြောင်း ဂျပန်သံရုံးကနေ Department of State ကို အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ မှာတော့ ချယ်ရီပင်တွေဟာ စီရေတယ်မြို့ ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ၁၉၁၀ အစောပိုင်းမှာ ချယ်ရီပင်တွေဟာ ဝါရှင်တန်ကို ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ အင်းဆက်တွေပါနေလို့သမ္မတက ဖျက်ဆီးဖို့အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ တိုကျိုမြို့ တော်ဝန် Yukio Ozaki က ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ချယ်ရီပင် ၃၀၀၀ ကျော် လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၂ မတ်လမှာတော့ သမ္မတကတော်နဲ့ဂျပန်သံအမတ်ဇနီးတို့ ဟာ ယိုရှီနိုချယ်ရီ ၂ ပင်ကို တိုင်ဒယ်ဘေဆင်ဘေးမှာ စိုက်ပျိုးခဲ့တာကအစပြုလို့သမ္မတကတော်အစဉ်အဆက်က ချယ်ရီပင်တွေ စိုက်ပျိုးပြီး ချယ်ရီပွဲတော်ကို ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ ချယ်ရီပွင့်တွေ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲ၊ ပွင့်ပြီလားလို့ဒီလင့်ခ် လေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မနက်စောစောဆိုရင်တော့ လူရှင်းပါလိမ့်မယ် ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က နေ့ လည်ဆိုတော့ နေရာတိုင်းမှာ လူတွေအပြည့်ပဲ။ တိုင်ဒယ်ဘေဆင်ကန်ကို တပတ်ပတ်လျှောက် ဒီစီမှာ ဆူနမ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Word World II Memorial ကို သွားဓာတ်ပုံရိုက်။ မိုးနှုးမတ်နားမှာ စွန်လွှတ်နေတဲ့သူတွေကို တွေ့ တယ်။ ဟိုးအဝေးက အိမ်ဖြူတော်ကို ပြပြလေး လှမ်းတွေ့ ရတယ်။ အေဘီစီနယူးစ်မှာ တက်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်က ကယ်ပီတယ်နားမှာ သေနတ်ပစ်လို့ကယ်ပီတယ်ကို lock down ထားတယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေ့ ခဲ့တာ အဲဒါနေမှာ။
When you see the beauty of Mother Nature, forget about everything & enjoy the moment with your own eyes. Just like him.
စမစ်ဆိုးနီးယမ်းနောက်က ပန်းခြံလေးက အတော်သာယာတယ်။ ပန်းခြံမှာထိုင်ပြီး အမောဖြေရတယ် ခြေထောက်က နာချင်လာပြီ။ ကိုယ် မလည်ရသေးတဲ့ ပြတိုက်တစ်ခု တွေ့ တယ် American Indians ပြတိုက်။ ပြတိုက်က ၅ နာရီခွဲ ပိတ်မှာ ၅ နာရီကျော်နေပြီမို့မဝင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်က ပြတိုက်ရဲ့ထောင့်တိုင်း၊ အထပ်တိုင်းကို နှံ့ ချင်တော့ အနည်းဆုံး ၄ နာရီလောက် အချိန်ယူရမယ်။ ပြတိုက်ရှေ့ မှာ အမေရိကန်ဒင်ဒီးယန်း တိုင်းရင်းသားနှစ်ယောက် တွေ့ တယ်။ ကယ်ပီတယ်ဘေးနားထိ ပြန်လျှောက်လို့ရထားစီးဖို့Capitol South ဘူတာရုံကို ရှာတာမတွေ့ လို့ရဲကို မေးရသေးတယ်။ SmarTrip card ဖြတ်တော့ ဝန်ထမ်းကို ပြောပါဆိုလို့သွားပြောရသေးတယ်။ SmarTrip ကဒ်ကို မသုံးတာ တစ်နှစ်အတိရှိပြီဆိုတော့ Inactivate ဖြစ်နေလို့activate လုပ်ရတာ။ နယူးယောက်ရထားတွေက Stand clear closing doors လို့ အော်ပြီး ဒီစီရထားတွေက Step back. Doors are closing လို့ အော်တယ်။ လိမ္မော်ရောင်လိုင်း Vienna bound ကို စီးပြီး East Falls Church ဘူတာမှာဆင်း Silver line ကိုစီးဖို့အောက်ထပ်ဆင်းတော့ ရထားလိုင်းမတွေ့ လို့အပေါ်ပြန်တက်။ ဘူတာမှာ ရေးထားတာကို ပြန်ဖတ်တော့ Silver line ကိုစီးဖို့အဲဒီပလက်ဖောင်းကနေပဲ စီးရမှာတဲ့။ ဘူတာကနေထွက်တော့ နယူးယောက်လို ကဒ်မဖြတ်ဘဲ သွားဖြတ်နေသေးတယ်။ နယူးယောက်မှာ အဝင်ပဲ ကဒ်ဖြတ်ရတယ် အထွက်ဖြတ်စရာမလိုဘူး။ ဒီစီ၊ ဘော်စတွန်မှာက အထွက်လည်း ကဒ်ဖြတ်ရတယ်။ Tysons Corner မှာဆင်း ကလဲယားကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ မေစီလျှော့ပင်းမောလ်နောက်က ကားဝင်းထဲမှာ စောင့်နေပါဆိုလို့သွားတာ မေစီမောလ်ထဲမှာပဲ ကလဲယားနဲ့ ဆုံတယ်။
ကလဲယားရဲ့ ကား အတုိုက်ခံရလို့ တဲ့ ဒါပေမဲ့ သူ့ အမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ အာမခံက အကုန်လုပ်ပေးသွားတယ်။ ကားကို ဘော်ဒီရုံမှာ သွားပြင်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာပေးထားတယ်။ ညစာစားပြီးတာနဲ့၉ နာရီလောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပင်ပန်းလို့တချိုးတည်း အိပ်တော့တာပဲ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ဖက်ထုပ်နဲ့ဆန်းကစ်ကို အိမ်နောက်ဖက်က Balcony မှာ နေရောင်ခြည်ခံရင်း စားကြတယ်။ ကလဲယားက သူ့ နောက်ဖက်အိမ်က 500k နဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ အိမ်ဈေးတွေ မြောက်လာတဲ့အကြောင်း၊ တချို့ ဆို အိမ်ကိုဖြိုချပြီး အသစ်ဆောက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြတယ်။ ကလဲယားရဲ့ အိမ်က ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် တိုင်ဆန်ကော်နာလျှော့ပင်းမောလ်နားမှာ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ကလဲယားရေ နောက်ဆယ်နှစ်လောက်ဆို ဒီနားမှာ ကိုယ်အိမ်ဝယ်ရင် ကိုယ်တို့ တွေ အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ကြတာပေါ့လို့မစားရဝမခန်း ပြောလိုက်သေးတယ်။ မနီးမဝေးက McClean ဆို ခြံတွေက သိပ်မကျယ်ဘဲ ဈေးတအားမြောက်တယ် နာမည်ကြီး အထက်တန်းကျောင်းတွေ ရှိလို့ တဲ့။ အိမ်ဈေးတွေက ကလဲယားတို့ ဖက်မှာသာ မြောက်တာ ကလဲယားသူငယ်ချင်းဆို ဆူနမ်တို့ နားမှာ အိမ်ဝယ်ထားတာ ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီ အိမ်ဈေးက မတက်လာဘူး။ သူ ဝယ်ဖို့ လုပ်တဲ့အိမ်၊ မဝယ်ဖြစ်တဲ့အိမ်တွေ၊ သူ့ အိမ်နားတဝိုက်က အိမ်တွေကို ကားနဲ့ တပတ် လိုက်မောင်းပြတော့ ကိုယ်က ဟိုအိမ်က လှတယ်နော်၊ ဟိုအိမ်အရောင်ကြီးက ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးနဲ့ဝေဖန်လေကန်တယ်။ အဲဒီအိမ်တွေကြည့်ပြီး အိမ်လေးတလုံးလောက်တော့ လိုချင်မိသား ဒါပေမဲ့ ခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
Jefferson Memorial. My favorite photo of this trip.
လိမ္မော်ရောင်လိုင်း East Falls Church ကနေ Metro Center ဘူတာမှာ ဆူနမ်တို့ အိမ်နဲ့ နီးတဲ့ အနီရောင်လိုင်းဂိတ်ဆုံး Shady Grove ကိုသွားတဲ့ ရထားကိုထပ်စီး။ ဒီစီမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်။ တခါတလေ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်တာကလွဲရင် စကားမပြောဖြစ်ကြပေမဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံတော့လည်း အရင်လို ရင်းရင်းနှီးနှီးပါပဲ စိမ်းနေတယ်လို့မခံစားမိဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြတော့လည်း ဆူနမ်က ဟွန်ဒါ SUV ဝယ်လိုက်တဲ့အကြောင်း၊ အမ်းထရူးကား အတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်ကို ကားမောင်းသင်ပေးတဲ့ ဂင်္ဂါ အိုင်အိုဝါကနေ မေရီလန်းကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံရောက်လာတဲ့အကြောင်း၊ ပရော်ဖက်ဆာနာဂျစ် မားစ်ဂြိုလ်သွားမယ့်အကြောင်း၊ ဘယ်သူတွေက အိမ်ထောင်ကျလို့ဘယ်သူတွေက ကလေးရနေပြီ၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်ပြည်နယ်မှာ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီး ဘယ်သူတွေနဲ့ တော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေအကြောင်း ပြောလိုက်ကြတာ ရေပတ်မဝင်ပါဘဲ။ နေ့ လည်စာစားပြီးရင် အမေရိကန်အင်ဒီယန်းပြတိုက်ကို သွားမယ်ဆိုတာတောင် မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ နင်တို့ချယ်ရီပွဲတော် မသွားဘူးလားမေးတော့ မနှစ်ကရောက်ပြီးပြီဆိုတော့ မသွားတော့ဘူးတဲ့။ ဟဲ့ ငါ့ဆို ချယ်ရီပန်းတွေကို မြင်ချင်လွန်းလို့မိုင် ၂၅၀ အဝေးကနေ တကူးတက လာရတာ။ နင်တို့ ကမှ တကယ့်နီးနီးလေး ရထား ၁ နာရီလောက် စီးရင်ကိုပဲ ရောက်တဲ့ဟာကို မသွားဘူးလားဆိုတော့ ငါတို့ က နင့်လိုမှ မဟုတ်တာတဲ့။ ကြည့် ကုိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက တကယ့်ငပျင်းလေးတွေ။ အနီရောင်လိုင်း Shady Grove ဘူတာကနေ မြို့ ထဲကို ရထားစီးတော့ စာဖတ်နေတဲ့ကိုယ့်ဘေးနားလာထိုင်ပြီး ဟိုင်း၊ ဟောင်းအာယူ ဂွတ်၊ ဖိလစ်ပီနိုလားလို့လာမေးနေလို့နိုးလို့ပြောလိုက်ရသေးတယ်။ ရုံးက ဖိလစ်ပိုင်ကြီးက ကိုယ့်ကို ဖိလစ်ပိုင်ထင်လို့ တဲ့။ ယူနီယမ်ဘူတာရုံက Chipotle မှာ ညစာဝယ်၊ ကယ်ပီတယ်နားက ချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီး ချယ်ရီတွေကို ငေးဖြစ်တယ်။ ချယ်ရီပွင့်တွေ အင်မတန် လှတာပဲ။
ဘရွတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ဂါးဒင်း၊ ရုစဗဲ့အိုင်လန်၊ နယူးဂျာဆီပြည်နယ် Newark မြို့ က Branch Brook ပန်းခြံတွေမှာလည်း ချယ်ရီပင်တွေ ရှိပေမဲ့ ဂျပန်တွေက ဒီစီက ချယ်ရီပင်တွေကို ပိုနှစ်သက်ပါသတဲ့။ ဒီစီက ချယ်ရီတွေက ဂျပန်ပြည်က ပို့ လိုက်တဲ့ ယိုရှီနိုချယ်ရီပင်တွေကိုး။ ယိုရှီနိုချယ်ရီပွင့်တွေက အဖြူရောင်များတယ် ပန်းရောင်ဆွတ်တယ် ဆိုရုံလေး။ ဘရွတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းက ချယ်ရီပင်တွေက ပန်းရောင်။ ဂျွှန်လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့ဒီနေ့Newark ချယ်ရီပင်တွေဆီ လမ်းလျှောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာ ချယ်ရီတွေက ဧပြီ ၂၀ ကနေ ၂၄ ရက်မှာမှ အစွမ်းကုန်ပွင့်မယ်ဆိုလို့မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဧပြီ ၂၅ နောက်တပတ်စနေနေ့ မှာမှ လိုက်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ် ချယ်ရီတွေ ပွင့်နေသေးဖို့မျှော်လင့်ရတာပဲ။ နောက်တပတ် ဝိုင်းလည်း ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ သွားဖြစ်ခဲ့ရင် ချယ်ရီပွင့်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒီစီမှာတုန်းက ချယ်ရီပွင့်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ ကလဲယားအိမ်ရှေ့ က ချယ်ရီပင်တွေနဲ့ကလဲယားရိုက်ပေးလို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲ ရခဲ့တယ်။ နောက်တပတ် သွားဖြစ်ခဲ့ရင် ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပါဦးမယ်။ ဧပြီ ၁၂ တနင်္ဂနွေည ၆ နာရီခွဲ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ၄ နာရီခွဲ ဘတ်စ်ကားကို စောင့်နေကြတုန်း။ Traffic က တော်တော်ဆိုးလို့နှစ်ဖက်လုံး delay တဲ့။ ည ၈ နာရီ နယူးယောက်ဆိုတဲ့ ဘတ်စ်ကား ၂ စီး ဝင်လာတော့ ခရီးသည်တွေ ဝမ်းသားအားရ ဟေးခနဲ အော်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၄ နာရီခွဲ၊ ၅ နာရီခွဲ၊ ၆ နာရီခွဲ စီးမဲ့သူတွေက အများကြီး။ ည ၇ နယူးယောက်ကိုထွက်မဲ့ ဘတ်စ်ကားက ၂ နာရီနောက်ကျပြီး ၉ နာရီမှာမှ ထွက်တယ်။
ဒရိုင်ဘာအမျိုးသမီးက သူ့ တသက် နယူးယောက်ကို တခေါက်မှ မရောက်ဖူးလို့သူ့ ကို လမ်းညွှန်ကြပါ၊ safe ဖြစ်အောင် အထူးဂရုစိုက် မောင်းပါမယ်လို့ ပြောတော့ ကိုယ်တို့ ခရီးသည်တွေ ရယ်လိုက်ရသေးတယ်။ Exit တွေ ရောက်တဲ့အခါ ဖုန်းဂျီပီအက်စ်တွေက ဘယ် Exit ကို သွားပါလို့လမ်းညွှန်သံတွေ ထွက်လာတဲ့အခါ ခရီးသည်တွေထဲက နှစ်ယောက်က လမ်းညွှန်ပေးတယ်။ အမြဲကားတွေပြည့်နေတဲ့ လင်ကွန်းတန်နယ်မှာ ကားတွေရှင်းနေတာပဲ ရှင်းဆို မနက် ၃ နာရီကိုး။ ပေါ့အသော်ရတီဘတ်စ်တာမင်နယ်ကို တွေ့ ပေမဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေ ဝင်ရမဲ့နေရာကို ရှာမတွေ့ လို့နှစ်ခေါက်လောက် ပတ်မောင်းရတယ်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရောက်တဲ့အခါ ဒရိုင်ဘာအမျိုးသမီးက ကူညီလမ်းပြပေးတဲ့ ခရီးသည်တွေကို ကျေးဇူးတင်သလို ခရီးသည်တွေကလည်း နယူးယောက်ကို တခေါက်မှမရောက်ဘူးဘဲ အခုလိုအဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်၊ safe ဖြစ်အောင် မောင်းနိုင်တာမို့good job လို့ချီးကျူးကြတယ်။ နယူးယောက်မှာ တခုကောင်းတာက ရထားတွေက ၂၄ နာရီ ရှိတာပါ။ အိမ်ရောက်တော့ မနက် ၃ နာရီခွဲ။ ၄ နာရီလောက်ပဲအိပ်ရပြီး မနက် ၇ နာရီခွဲဆို ရုံးတက်ဖို့အိမ်ကထွက်ရပြီ။ အဲဒီနေ့ မနက်က ရုံးမှာ အရေးကြီးတဲ့ အစည်းအဝေးတခု ရှိတယ်။ ရုံးမှာ အိပ်ငိုက်မလားမှတ်တယ် အလုပ်ရှိနေတော့ မျက်လုံးကို ပြူးနေတာပဲ။ နွေဦးရောက်ပြီဆိုတော့ ရာသီဥတုက သိသိသာသာ နွေးလာပြီ။ အနွေးထည် အထူကြီးတွေ ဝတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ သစ်ရွက်ဖူး စိမ်းစိမ်းလေးတွေကို မြင်ရပြီ။ နောက်ထပ် ခရီးတွေ သွားချင်ပါသေးတယ်။
ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၅။
An Insider's Guide to the Cherry Blossom Festival in D.C.
Stunning GIFs of DC's Cherry Blossom in Bloom
ဆန်းထွန်းရေ... ချယ်ရီပန်းပုံတွေကို အားကျစွာနဲ့ကြည့်သွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ အလည်ရောက်တုံး ချယ်ရီပင်တွေ အရိပ်အောက်လမ်းလျှောက်ရင်း ပန်းပွင့်ချိန်ဆိုဘယ်လောက်လှမလဲ သိချင်နေမိခဲ့တာ။ ခု ဆန်းထွန်းတင်ထားတဲ့ ပုံတွေမြင်ရလို့ဆန္ဒ တ၀က်ပြည့်သွားတယ်။ (ဆန်းထွန်းရဲ့ ပုံတွေနဲ့ မိုးဦးရိုက်ခဲ့တဲ့ Angle တွေတော်တော်တူတယ်) ချယ်ရီပန်းပွင့်ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့ နောက်တခေါက် အလည်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားအုံးမယ်။
ဒီBlog လေးကို အမြဲရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ခုမှပဲ မန့်ဖြစ်တယ်။
ချယ်ရီပန်းတွေက မနှစ်ကလိုပဲ ဒီနှစ်လည်း လှမြဲလှဆဲ....ပထမဆုံး ကွန့် မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးနော်...
All About NYC - 5
All About NYC - 4
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၄